April 2021 - Umbele I SMME Profiles I Labour I Economics I Agriculture I Executive Interviews I Personal Finance News
Usomnotho waseFNB uMnu uSiphamandla Mkhwanazi uhlaziya iMonetary Policy Review
Ama-e-hailer ayishintshile indlela okuthuthwa umphakathi ngayo
Idinga ukufakelwa izibuko eyezithuthi zomphakathi ezisebenza ngobuchwepheshe besimanjemanje. USLINDILE KHANYILE uyabika
KUNINGI osekushintshile ngenxa yokuthuthuka kobuchwepheshe emhlabeni. Enye yazo yindlela umphakathi othuthwa ngayo njengoba sekwaba khona izimoto umuntu azibiza “ngokugingqa isithupha” kwi-internet bese ifika qathatha lapho ekhona izomlanda, phelecezi ama-e-hailer.
UMnu uMakatu Tshivhula, umnikazi we-The Light Candles yaseSoweto, eGoli
Ungenisile ebhizinisini angalifundelanga. Wenza ezibukwayo ebhizinisini lokwenza amakhandlela. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE
EMVA kokuphothula iziqu zokuba yi-psychologist enyuvesi, akathathangwa efisa ukuqhubeka enze i-Honours kanti imizamo yokuthola umsebenzi kulo mkhakha awufundele ayiphumelelanga.
#Ubuchwepheshe Izindaba UDABA OLUKHOKHELWE
Siphila esikhathini lapho impilo ilawulwa wubuchwepheshe ngezindlela ezihlukene nokwenza ukuthola ulwazi kube lula. Kukhona nezinkundla zokuxhumana lapho noma ngabe wubani, hhayi nje ungoti kuphela ekwazi ukubhala noma yini ayithandayo kuzona. Kodwa akulona lonke ulwazi olutholakala kwi-internet nasezinkundleni zokuxhumana oluyiqiniso nokungakho kumqoka ukwazi ukuthi uyibona kanjani into ukuthi iyiqiniso noma cha. Namhlanje siphothula umkhankaso oxhaswe yi-Africa Check obunicathulisa ngaloku.
NGAPHAMBI kwamaphakathi no-2020, igama elithi DJ Kgaogelo Moagi, odume ngelikaMaster KG, belingasho lutho olutheni kwabaningi futhi akulona abantu abaningi abebengasheshe balikhumbule. Kodwa manje sekuyigama elihambisana nempumelelo emhlabeni jikelele futhi nelaziwa yizigidi ngezigidi zabantu kanjalo nomnikazi walo.
IKhomishini kaZondo imqoka ekulungiseni umonakalo wenkohlakalo, kuloba uBusi Mavuso
IMPELASONTO ende esiphuma kuyona inginike ithuba lokubukela iKhomishini ephenya ngokugwamandwa koMbuso nokujula ngenselelo esibhekene nayo sonke yokuvuselela uhulumeni emva komonakalo weminyaka.
Qinisekisa ukuthi konke okumayelana nebhizinisi kuqoshwa phansi, kuloba uNtokozo Biyela
NGESONTO elidlule sithinte udaba olumayelana nokukhetha uphathina okahle ebhizinisini. Cishe lesi sihloko sikwenze wabukisisa ubudlelwano bakho onabo kabusha nophathina wakho.
Siphila esikhathini lapho impilo ilawulwa wubuchwepheshe ngezindlela ezihlukene nokwenza ukuthola ulwazi kube lula. Kukhona nezinkundla zokuxhumana lapho noma ngabe wubani, hhayi nje ungoti kuphela ekwazi ukubhala noma yini ayithandayo kuzona. Kodwa akulona lonke ulwazi olutholakala kwi-internet nasezinkundleni zokuxhumana oluyiqiniso nokungakho kumqoka ukwazi ukuthi uyibona kanjani into ukuthi iyiqiniso noma cha. Siyaqhubeka nomkhankaso oxhaswe yi-Africa Check ozonicushisa ngaloku
LE MITHOMBO ingaba yisiqalo sokuzama ukuthola ulwazi olusezingeni eliphezulu. Nakuba kunjalo nokho kumele uhlale ubeke emqondweni ukuthi awukwazi ukuvele uthathe noma iyiphi inkulumo nje bese uzitshela ukuthi inolwazi okuyilona ngesihloko esithile.
UMnu uZakhele Mbatsane, umnikazi wendawo yokungcebeleka i-Ebukhosini Resort eMzinti, eMpumalanga
Uwungoti wezobuchwepheshe osebenzisa ezokuvakasha ukuthuthukisa indawo yasemakhaya. Uxoxe noZANELE MTHETHWA
ULETHE ubukhazikhazi nobumnandi endaweni edelelekile yasemakhaya usomabhizinisi waseMpumalanga ozimisele ukuthuthukisa indawo yangakubo.
UNkk uThandi Ngxongo, umnikazi wegaraji elikuChe Guevara (uMoore) Road eThekwini
Uguqula izinto ngemfundo nangamabhizinisi embonini kawoyela osanda kuthenga igaraji edolobheni. Uxoxe noZANELE MTHETHWA ngohambo lwakhe
UKHULE edlala nabafana ngezimoto ezakhiwe ngamapulangwe nezingcingo usomabhizinisi ongomunye wabambalwa besifazane abamnyama abanamagaraji kaphethroli.
Siphila esikhathini lapho impilo ilawulwa wubuchwepheshe ngezindlela ezihlukene nokwenza ukuthola ulwazi kube lula. Kukhona nezinkundla zokuxhumana lapho noma ngabe wubani, hhayi nje ungoti kuphela ekwazi ukubhala noma yini ayithandayo kuzona. Kodwa akulona lonke ulwazi olutholakala kwi-internet nasezinkundleni zokuxhumana oluyiqiniso nokungakho kumqoka ukwazi ukuthi uyibona kanjani into ukuthi iyiqiniso noma cha. SIyaqhubeka nomkhankaso oxhaswe yi-Africa Check ozonicushisa ngaloku.
IQINISO elingenakuphikwa wukuthi izinkundla zokuxhumana zikhuthaza ukusabalaliseka kwezithombe nama-video, nokuthi-ke isithombe esifakwe ezinkundleni zokuxhumana yisona esisethubeni lokusabalala kakhulu ukwedlula umbhalo omude.
UNgqongqoshe wezeziMali uMnu uTito Mboweni, ngokwamagunya anawo, useqoke uMnu u-Unathi Kamlana ukuthi abe wuKhomishana weFinancial Sector Conduct Authority. UKamlana uyinHloko yomNyango we-Policy, Statistics and Industry Support ePrudential Authority eBhange loMbuso. Izintambo uzoziphatha iminyaka emihlanu kanti kulindeleke ukuthi aqale mhla ka-1 kuJuni 2021.
INTSHISEKELO yokuthi njengentatheli kube nguwena oba ngomunye wabokuqala abazisa umphakathi ngodaba oluthile ivame ukudala ixhala nokukhathazeka. Kodwa-ke leyo ntshisekelo yokusheshisa udaba isho ukuthi kufanele uhlolisise ukuthi lokho ofuna ukukusabalalisa kuyiqiniso kangakanani.
Ezolimo ziwuthwalile umnotho waseNingizimu Afrika ngonyaka odlule
Ezolimo zithele izithelo zasimama ngesikhathi sobunzima. Izingqapheli zithi izinqumo eziphusile zokuphatha imali zizoqinisekisa ikusasa lo mkhakha mhla kwanesomiso
IMBONI yezolimo ithwale umnotho waseNingizimu Afrika emahlombe ngo-2020, yaphunyula ekukhahlanyazweni wubhubhane iCOVID-19, ngaphandle kwemikhakha embalwa njengokagwayi nowewayini.
UMnu u-Itumeleng Lekomanyane, umnikazi weSandwich Nton Nton yaseGoli
Likhula ngamandla ibhizinisi lensizwa eziphilisa ngokudayisa amasemishi emgwaqweni njengoba isinesitolo. Ixoxe noZANELE MTHETHWA
UKUFEYILA umatikuletsheni kathathu akuyivimbanga ukuthi iqale ibhizinisi insizwa yaseGoli esidume ngeSandwich King.
Siphila esikhathini lapho impilo ilawulwa wubuchwepheshe ngezindlela ezihlukene nokwenza ukuthola ulwazi kube lula. Kukhona nezinkundla zokuxhumana lapho noma ngabe wubani, hhayi nje ungoti kuphela ekwazi ukubhala noma yini ayithandayo kuzona. Kodwa akulona lonke ulwazi olutholakala kwi-internet nasezinkundleni zokuxhumana oluyiqiniso nokungakho kumqoka ukwazi ukuthi uyibona kanjani into ukuthi iyiqiniso noma cha. Kusukela namhlanje sizokwethulela umkhankaso oxhaswe yi-Africa Check ozonicushisa ngaloku
AKUYONA yonke inkulumo ongakwazi ukubheka uthole ubuqiniso bayo. Umbuzo wokuqala okumele uzibuze wona ngaphambi kokuzama ukubheka ubuqiniso ngothi: ingabe le nkulumo ingahloleka yini noma cha?
Asifake igxalaba ukuvuselela imboni yokukhiqiza, kuloba uBusi Mavuso
KUSUKELA ngo-1994 imboni yokukhiqiza isinciphile njengoba nasemnothweni ifaka u-13.3%, isuka ku-21.5%. Enye imbangela yaloku wukulungisa indlela izinto ezazenzeka ngayo ngesikhathi sobandlululo, njengoba kwakukhiqizwa impahla ngendlela engahlelekile ngenxa yonswinyo.
Khetha kahle uphathina ozobambisana naye ebhizinisini, kuloba uNtokozo Biyela
NAMHLANJE ngifisa sibheke ukuthi umkhetha kanjani uphathina ebhizinisini lakho. Ngifisa futhi sibheke amaphutha abaningi abawenzayo uma bekhetha ophathini.
UMNYANGO wezeziMali neBhange loMbuso sebezichithile izinsolo ezenziwe wuMnu uTokyo Sexwale othe kunezigidigidi zemali ezanikelelwa iNingizimu Afrika ukuze zilekelele umphakathi kodwa esezinyamalele. USexwale uthe lezi zizumbulu zafakwa ebhange lombuso ngoba zanikelwa ziqhamuka phesheya. UmNyango wezeziMali neBhange loMbuso bathe sebake bamchazela uSexwale ukuthi loku yinto engekho kanti bacabanga ukuthi yimizamo yokuqola abantu. Bathe uSexwale akayena umuntu wokuqala odumile oseke wabuza ngale mali-mbumbulu.
I-EXXARO isiqoke uMnu uGeoffrey Qhena ebhodini layo kanti futhi kulindeleke ukuthi athathe izintambo njengosihlalo walo. UQhena unamava okuphatha izinkampani ezimbonini ezihlukene njengoba eke wasebenza eKPMG, kwa-Eskom, e-University of Johannesburg, eTransnet nase-IDC.
I-ABSA isiqoke uMnu uJason Quinn njengebamba lesikhulu esiphezulu ngemva kokushiya kukaMnu uDaniel Mminele. Leli bhange lithe uMminele uzogcina ekupheleni kuka-Ephreli ngemva kokungaboni ngaso linye ngomkhombandlela okumele ulandelwe nangezindaba ezithinta uguquko endleleni okwenziwa ngayo izinto kule nkampani.
UMnu uMpumelelo Zikalala uchaza ngeNkantolo yokuDlulisa amaCala neyoMthethosisekelo
USihlalo we-Ilangabi Elingacishi Youth Nursery uMnu Philani Magwaza ekhombisa iMeya yeTheku uMxolisi Kaunda umsebenzi wabo
Umfelandawonye wentsha ukhulise umsebenzi wezolimo weminyaka ngenkathi kuvalwe izwe njengoba usidayisela uSPAR. Amalungu awo axoxe noZANELE MTHETHWA
ISASASA lokutshala emakhaya ngenkathi kuvalwe izwe ngenxa yokubheduka kweCOVID-19 lisize intsha ekhuthazeke ukugqamisa umfelandawonye odlondlobalayo wabalimi.
UNksz uThobeka Ngcongo, umnikazi weZenovuyo Treatz ebhaka amakhekhe
Uncelisa amawele odayisa iziyoliyoli zamakhekhe enkabeni yedolobha ngenkathi eqedela iziqu enyuvesi. Uxoxe noLANGA KHANYILE
UKUZULAZULA imigwaqo yenkaba yedolobha uhambe udayisa noma ukubeka itafula lokudayisa cishe akusiyona into ongayilindela kwisitshudeni sasenyuvesi. Ayisaphathwa-ke eyokudayisa erenki yamatekisi.
UNkk uFuthi Mhlongo, uMcwaningimabhuku-Jikelele KwaZulu-Natali
Umsebenzi abizelwe kuwona unezinselelo futhi uyasinda emphefumulweni kodwa ukwazi ukuthi usiza umphakathi kuyamgqugquzela ophethe iHhovisi loMcwaningimabhuku-Jikelele KwaZulu-Natali. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE
ENONYAKA ethathe izintambo zokuba wumphathi eHhovisi loMcwaningimabhuku-Jikelele KwaZulu-Natali uNkk uFuthi Mhlongo waphoqeleka ukuthi ahoxise ithimba labacwaningimabhuku ababecwaninga uMasipala waseThekwini ngoba esabela ukuphepha kwalo emva kokuthi lisatshisiwe.
EZIMBONINI ezimbalwa ezasungulwa nezilawulwa ngabantu abamnyama, eyamatekisi iyona enkulu kunazo zonke. Ngokusho kweKhomishini yokuNcintisana le mboni esineminyaka ecela ku-50 iqashe abantu abawu-500 000 kanti kunabadayisi abawu-150 000 abaphila ngokudayisa emarenki … Read More
UMnu uThabisho Molelekwa, umkhulumeli weSouth African National Taxi Council
IKhomishini yokuNcintisana ithi kuningi okudinga ukuguqulwa endleleni okuthuthwa ngayo umphakathi ukuze kuhlomule abagibeli. USLINDILE KHANYILE uyabika
INHLANGANO yamatekisi ezweni iSouth African National Taxi Council (iSANTACO) ithi imipumela yocwaningo obelwenziwa yiKhomishini yokuNcintisana ngemboni yokuthutha umphakathi ifakazela into esineminyaka ikhala ngayo futhi ithemba ukuthi kuloku uhulumeni uzolalela bese uthatha izinyathelo ezifanele.
UNksz uTinyiko Mabunda, umnikazi weVahlave Knits and Crochet yaseBushbuckridge, eMpumalanga
Ukhamba lufuze imbiza kumthungi osemncane. Kepha leli khono uselibeke kwelinye izinga owenza into eyayenziwa wunina. Uxoxe noTEBOGO MOKWENA
UMSIKI wengqephu osemncane ulandela ezinyathelweni zikanina ngokusebenza ngewuli. Nokho emisikweni yakhe yena usengeze ukukhrosha nokunitha izimpahla ezineNkosi phakathi.
Ziyethembisa izinto kuhulumeni kodwa iseyinde indlela, kuloba uBusi Mavuso
UHULUMENI unezisebenzi eziwu-2 million kanti unesabelomali sikaR1.8 trillion. Lokhu kumenza inkampani engelula futhi ezoba nalo lonke uhlobo lwezinkinga zokuphathwa.
#Ubuchwepheshe Kugiya ongoti
Uvuka uzithathe kanjani ngemva koku‘shaywa’, kuloba uZama Simelane
EMASONTWENI amabili edlule kube nemibiko ethi emhlabeni jikelele kuhlaselwe noma ku‘shaywe’ izinkampani kusetshenziswa ama-server akwaMicrosoft. Loku kwenze ukuthi izinkampani zaseNingizimu Afrika, okubalwa namabhange kuzona, zaba sengcupheni. Udaba engilufundile ngale nto luthe iNingizimu Afrika ingenye yamazwe angaphephile emhlabeni ngenxa yokungazi ngezinto ezithinta ukuphepha kwi-internet, phecelezi i-cyber security. Yingakho-ke ngiphinda ngifisa ukudlula kuloku, ngigcizelele ubumqoka bokuhlala uqaphile kwezokuxhumana ngobuchwepheshe besimanje.
Qonda ngobuciko bokwethula inkulumo ngebhizinisi lakho, kuloba uNtokozo Biyela
NAMHLANJE ngithanda sibheke ubuciko bokubeka inkulumo ngebhizinisi. Siyazi ukuthi uma uzisebenza kufanele uhlale njalo uzilungiselele, ucuphe isisoka ngoba awazi ukuthi ithuba lokwenza lizovela nini.
UMnu uMpumelelo Zikalala uchaza ngomehluko phakathi kokusebenza kweNkantolo yeMantshi neNkantolo eNkulu
Umeluleki we-Isukile Agricultural Co-operative uNksz uThato Magane, iMeya yeTheku uMnu uMxolisi Kaunda nosihlalo we-Isukile Agricultural Co-operative uNksz uNonhle Mdunge
Bavuke bazithatha abadilizwa kwaRainbow Chicken njengoba sebengabalimi bezinkukhu ezithi bona. UZANELE MTHETHWA uxoxe nabo
KUGCWALISEKE isisho esithi ukuwa kwenye wukuvuka kwenye ezisebenzini ezadilizwa kwaRainbow Chicken eCato Ridge, entshonalanga yaseThekwini. Kwaqhuma isililo nxa zonke ngenkathi kudilizwa izisebenzi ezingaphezu kuka-100 kule nkampani, kwalala ikati eziko emindenini eminingi.
Ngemva kokubonisana nomNyango wezeziMali, iBhange loMbuso neBank Association of South Africa bavumelene ngokwelula isikhathi seLoan Guarantee Scheme (iLGS) izinyanga ezintathu kuze kube mhla ka-7 kuJulayi 2020. I-LGS yamenyezelwa wuMengameli uMnu uCyril Ramaphosa mhla ka-21 ku-Ephreli 2021 ngokohlelo lokuzama ukuvuselela umnotho i-Economic Stimulus Package ngenhloso yokweseka amabhizinisi amancane ayebhekene nobunzima ngenxa yomphumela weCOVID-19. Kuze kube manje amabhenki aseboleke amabhizinisi awu-14 827 imali ewuR18,16 billion. Nokho lolu hlelo alubanga yimpumelelo njengoba bekuhleliwe njengoba izinkampani eziningi ezishayekile zingabanga nkamunkamu ukuboleka imali ngenxa yokwesaba ukucwila ezikweletini. Ukululwa kohlelo lokubolekisa kuzokwenza ukuthi kusongwe izinto ngendlela. Lolu hlelo luzokwenza ukuthi kubolekwe bonke abafaka izicelo kusukela esikhathini sokwelulwa kwalo kuye kuze kuphele iminyaka emihlanu.
UNksz uBongiwe Thela weToda Products, umsunguli webhizinisini le-branding
Ungomunye wosomabhizinisi ababone ithuba ngokudingeka kwezifonyo ngenxa yeCOVID-19. Uxoxe noZANELE MTHETHWA
UFUKULWE wukubheduka kweCOVID-19 usomabhizinisi osemncane waseMalahleni, eMpumalanga, odayisa izifonyo zokuzivikela kuleli gciwane.
UNksz uGugu Ndebele, umphathi we-Oprah Winfrey Leadership Academy for Girls eMeyerton, eGoli
Uwuqweqwe ekuphatheni emkhakheni wezemfundo kanti uthi okumsiza kakhulu yizifundo azithola ngesikhathi ‘ewile’ empilweni. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE
WAYISWA eNanda Seminary aziwa ukuthi uhlakaniphile kodwa wafika kwabheda uhlelo kulesi sikole agcine engawuphothulanga nomatikuletsheni kusona.
NGESONTO elidlule sithole izindaba ezinhle nezimbi ngesimo sezimali eNingizimu Afrika. Umqoqintela uveze ukuthi ngonyaka wezimali wango-2020/21 uqoqe imali engaphezulu kunaleyo abeyilindele ngoR38 billion, nokudalwe kakhulu yinzuzo enkulu eyenziwe yizimayini ngenxa … Read More
UNksz Fikile Khuzwayo, i-barista yaKwazulu-Natali
Uthando lwekhofi lumholele ebhizinisini elingavamile endlini emnyama ovuba ikhofi. Uxoxe noZANELE MTHETHWA
UNGOMUNYE wabesifazane abambalwa emkhakheni wokuvuba ikhofi. Ukukhonya kwesiqhoqho samadoda kulo mkhakha nokufisa ukushintsha le ndima kutshale uthando lokufisa ukushintsha loku ngokuqala ibhizinisi nokufundisa nabanye ngamathuba akhona kule mboni.
Ezempilo zimanaphanapha amacala okumangalelwa nokuyizigidi zamarandi
Izithombe: wuGoogle noCanva
Izikhalo zobudedengu zizoziqumba phansi ezempilo eNingizimu Afrika njengoba kumanje inani lokumangalelwa komNyango liwuR105.8bn. USLINDILE KHANYILE uyabika
INGOZI enkulu, nengase igcine iqumbe phansi ezempilo eNingizimu Afrika, yizikhalo zokuboshwa kwemiNyango yezeMpilo isolwa ngobudedengu njengoba kumanje lezi zikhalo ziwuR105.8 billion.
Asisebenzise imigomo esinayo ukukhulisa umnotho, kuloba uBusi Mavuso
KUMELE zithakaselwe izindaba ezimnandi ngomnotho. Isimemezelo sabaqoqintela ngesonto eledlule sokuthi baqoqe intela engaphezu kwalena ebilindelekile siyajabulisa. Imali engenile ingaphezulu ngoR38 billion emalini ebilindelekile ngokwesabelomali sango-2020/21.
Impumelelo ebhizinisini isendleleni ophatha ngayo amakhasimende, kuloba uNtokozo Biyela
NAMHLANJE ngifisa sibheke udaba olubalulekile lokuthi uwaphatha kanjani amakhasimende ebhizinisini. Lesi sihloko sivuswa wudaba engilubone ezinkundleni zokuxhumana omunye wabangani bami, umfokaNgqulunga, ekhala ngempatho engeyinhle ayithole kwesinye isitolo ngenkathi eyothenga ukudla kwakwakhe.
UMnu uMpumelelo Zikalala echaza ngokusebenza kweLabour Court neSmall Claims Court
UmNtwana uMuzi Fodo, usihlalo weNhlangwini Community Co-operative yaseKZN
Isimo sakhe sokuzalwa, imfundo yakhe, isimo sakhe sempilo konke bekungenza kube lula ukuthi ahlale phansi dekle, atamuze umbuso noma abheke izindaba zakhe. Kodwa umntanenkosi usekhaleni lokuthuthukisa umphakathi wasemakhaya. Uxoxe noLANGA KHANYILE
KUNESISHO sesiNtu esithi ukuzalelwa emqubeni, okusho ukuba nenhlanhla yokuzalelwa ebukhosini noma ebugwilini. Yingakho izingane zezigwili noma abantwana basebukhosini zidume ngokuthi izinto zazo zilula, okwazo nje wukulindela ukudlula kwabazali, zidle ifa bese zitamuza ubumnandi.
Isikhulu esiphezulu se-IDC uMnu uTshokolo Nchocho
Umbhidlango wesikhwama sikaR1 billion sokufukula abalimi abamnyama bayeke ukuba ngabasafufusa
UMNYANGO wezoLimo nokuThuthukiswa kweziNdawo zaseMakhaya ne-Industrial Development Corporation (i-IDC) bethule isikhwama sikaR1 billion okuhloswe ngaso ukukhulisa abalimi abamnyama, i-Agri-Industrial Fund.
I-DISCOVERY Bank isimemezele ukuthi isiqoke uqweqwe lukasomabhizinisi uDkt uReuel Khoza njengosihlalo wayo kusukela mhla ka-1 ku-Ephreli. Kusukela leli bhange lasungulwa usihlalo walo bekuwuMnu u-Adrian Gore, isikhulu esiphezulu seDiscovery Group, engabanikazi baleli bhange.
OQONDENE nokusongwa kwezindaba zebhange elawa iVBS Mutual Bank, uMnu u-Anoosh Rooplal, ukhumbuze ababenemali efinyelela kuR100 000 kuleli bhange ukuthi bangayikhipha imali yabo eNedbank kuze kube mhla ka-8 kuJulayi. Lolu yilona suku okuzophela ngalo lesi sivumelwano esesineminyaka emithathu phakathi kukaRooplal, iPrudential Authority neNedbank. Kuma-akhawunti awu-18 300, awu-17 750 enani likaR260 million athuthelwa eNedbank, kanti u-98% wabantu usuwayilanda imali yawo. Kukhona awu-3 773 abantu ababenemali ewuR100 nangaphansi avalwa ngenxa yezindleko. Isiyonke imali kulama akhawunti yayiwuR105 000 kodwa nabanikazi bawo banelungelo lokuyifuna imali yabo kuze kube mhla ka-8 kuJulayi 8. Kusanda kuthuthelwa amanye ama-akhawunti awu-370 anoR3.7 million.
UMNYANGO wezeziMali eNingizimu Afrika usumemezele ukuthi usuqoke izinkampani ezine zokuxhumana ukuthi zihlinzeke izinhlaka zikahulumeni nge-data nangamaselula. Le nkontileka yeminyaka emihlanu eqale mhla ka-1 Ephreli inikezwe iCell C, iMTN, iTelkom neVodacom. Phambilini le nkontileka yayinikezwe iVodcom kuphela.
Umcwaningimabhuku-jikelele uNksz uTsakani Maluleke wethule umbiko wokucwaninga amabhuku ngo-2019/20
Umcwaningimabhuku-jikelele uthi kusabhimba ngokuphatha izimali zezwe futhi kukhona okusina kuwajeqeza amabhizinisi kahulumeni amancane. USLINDILE KHANYILE uyabika
UMCWANINGIMABHUKU-jikelele waseNingizimu Afrika usexwayise ngokuthi uma ingasukunyelwa indaba yamabhizinisi kahulumeni “amancane” azogcina esewumthwalo kwisabelomali.
UNksz uKedibone Mokobodi, umnikazi weKedi’s Handcrafted Cosmetics yasePitoli, eGauteng
Iphoyisa ligcine lifeze iphupho leminyaka lokuba nebhizinisi lezimonyo. Lixoxe noZANELE MTHETHWA
KUNGENZEKA ukuthi ungomunye wabantu abangakaze bamatanise iphoyisa nomkhakha wezimonyo nobuhle. Amaphoyisa, ngisho awesifazane, athathwa njengabantu abadle ngemisebenzi yezikhwepha.